‘नाई नभन्नु ल ६’ बन्ने तयारीमा ! - VON TV
१२ माघ २०७६, आईतवार १०:१७ 124 ??? ???????
चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल’को छैटौ सिरिज पनि बन्ने भएको छ । यसका निर्देशक तथा लेखक विकासराज आचार्यका अनुसार, अहिले चलचित्रको स्क्रिप्ट र संगीतमा काम भैरहेको छ । विकासले ‘नाई नभन्नु ल ५’ बनाएपछि ‘हजार जुनी सम्म’ नाममा चलचित्र बनाएका थिए । तर, यो चलचित्र बक्स अफिसमा असफल भयो । यसपछि भने उनी, आफ्नै हिट सिरिजमै लागेका हुन् ।
चलचित्रको छायांकन वैशाखको दोश्रो साताबाट सुरु गर्ने योजना विकासको छ । चलचित्रमा नायक सलोन बस्नेत, बाल–कलाकार अनुभव रेग्मी र सेड्रिना शर्मा पक्का भैसकेको विकासले जानकारी दिए । अन्य कलाकार भने चयन भएका छैनन् ।
यो चलचित्रमा ३ नायिका र एक नायक हुने बताइएको छ । विकासका अनुसार, ३ मध्ये एक नायिका भने नयाँ खोजिनेछ । नायक पनि नयाँ अनुहार नै राख्ने तयारी उनको छ । चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल’ नेपाली चलचित्रको सिरिजको दुनियाँमा हिट मानिन्छ । यसका सिरिजका गीतसंगीत र कथावस्तुलाई दर्शकले मन पराउँदै आएका छन् ।
नायिका आँचल शर्माले गरिन् ‘इन्गेजमेन्ट’
नवनीत र सत्यको “ढिकी कुटी” ( भिडियो )
जर्मनीमा नेपाली दूतावास भवन विक्रीमा